ZoomInfo: Chengeta Yako B2B Dhata Yakagadziridzwa | Martech Zone
Svondo, Gunyana 15, 2013 Douglas Karr
Zvishoma zvishoma zve data rako reB2B harisi rekare. Zoominfo inoshuma kuti 70% ye data rese reB2B richava neshanduko imwe kana kupfuura mukati megore. Shanduro yevashandi, kukwidziridzwa, kuwanikwa, kuvharwa kwebhizinesi… zvese izvi zvinogona kutyaira mhando yedata rako rekutsvaga pasi. Idzi nyaya dze data dzinogona kukonzera matambudziko mune zvese kutengesa nekutengesa. Mukutengesa, kana timu yako inobuda iri kufona kana kutumira vanhu tsamba kuti havasisipo, inguva yakatambiswa. Mukushambadzira, kuva data data zvinogona kukonzeresa kuti yako email kuburitsa kune plummet.
Yakawanda sei yako data rekutarisira yakapera kana kukwana? Regai Zoominfo ongorora dhatabhesi yako, vhura yako akanakisa tarisiro, gadziridza zvese uye shandura chako chinodikanwa gen mumushini wemari-wekutyaira.
Zoominfo's Dhata Services Inopa
Dhiyabhorosi Intelligence - kuongorora kwakadzama kwekushambadzira kwako otomatiki kana CRM dhatabhesi kuitira kuti iwe uwane iwo ruzivo rwunodiwa kuti ukure bhizinesi rako. Zoominfo inopa sangano rako zviito zvinokurudzira kuti uvandudze kubudirira kwemishandirapamwe yako.
Data Management - CRM dhata inoramba ichichinja. Zoominfo inogona kubvisa ruzivo rwechinyakare, kuongorora maemail kero ekuti isunungurwe, tsvaga tarisiro nyowani, kugadzirisa uye nekuzadza marekodhi, wedzera vanoita sarudzo, gadzira yakanangwa zvikamu uye nekupa kuenderera kwekuvandudza.
Kune nyanzvi uye mabhizinesi madiki, Zoominfo inopa Zoominfo Batanidza. Joinha ZoomInfo Unganidza kuti uwane mukana kune-up-to-date uye inokurumidza kukura B2B dhatabhesi, ine ruzivo rwakadzama rwevanopfuura mamirioni makumi matanhatu nemashanu emabhizimusi uye mamirioni matanhatu mabhizinesi.
Zoominfo zvakare inopa Zoominfo Pro iyo inosanganisira anogara achiongorora profiles - inosvika 65 mamirioni evashandi uye mabhiriyoni matanhatu emabhizinesi. Zoominfo Pro inokutendera iwe kunongedza nekushamisa kwakaringana uye kusvika kune angangodaro ekutenga tarisiro.
Zoominfo Nharaunda Yenharaunda
Kune mabhizinesi madiki asina bhajeti, Zoominfo zvakare ine Nharaunda Yekutsikisa uko iwe kwaunogona kujoina vanopfuura zviuru zana veZoomInfo vashandisi vanozvigovana zvavo mabhizinesi emabhizimusi mukutsinhana kwekusununguka kuwana ZoomInfo.
Zoominfo zvakare inopa API!
Tags: b2bb2b dhatazoominfozoominfo munharaunda editionzoominfo connectzoominfo data serviceszoominfo pro
Izvo Zvausina Kunzwa paApple Keynote: iBeacons